यस्तो छ फेसबुकमा भाइरल GRATULA को अर्थ ! – ताजा समाचार
यस्तो छ फेसबुकमा भाइरल GRATULA को अर्थ !
काठमाडौं : कहिलेकाही सानोतिनो ठ’ट्टाले निकै ठूलो हंगामा गरिदिन्छ । यतिबेला फेसबुकमा त्यस्तै ठट्टा भाइरल बनेको पाइन्छ । फेसबुकमा भाइरल भैरहेको शब्द ग्राटुला GRATULA बारे सबैलाई भ्रम परिरहेको छ । अहिले यसको आतं’क नै मच्चिएको छ ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू सधैजस्तै यो पल्ट पनि झुक्किएका छन् । धेरैले आफ्नो वालमा पेस्ट गर्ने हतारो गरिरहेको GRATULA शब्द रातो हुँदैमा सुरक्षित हुने होइन र यो कुनै फेसबुकका मालिकले बनाएको शब्द पनि होइन ।
केहि समय अगाडी चलेको BFF जस्यै आतं’क हो । फेसबुकका संस्थापकले एउटा शब्द बनाएको रे GRATULA अनि त्यो शब्द कमेन्टमा लेख्दा रातो आयो भने तपाईँको फेसबुक ह्या’क नभएको अनि कालो भयो भने चाहिँ ह्या’क भएको भनेर लेखिएको छ। यो गलत हो। रातो आउनु र नआउनुले फेसबुक ह्या’क भएको वा नभएकोसित कुनै सम्बन्ध राख्दैन।
GRATULA हङ्गेरी भाषाको शब्द हो। यसको अर्थ बधाई भन्ने हुन्छ। जसरी बधाई कमेन्टमा लेख्दा रातो हुने गर्छ, त्यसरी नै उस्तै अर्थ दिने हङ्गेरी भाषाको शब्द भएको हुनाले GRATULA लेख्दा पनि रातो हुने गरेको हो।
एक नेपालीले मजाकको लागि बनाएको फेसबुकको त्यो पोस्ट अहिले भाइरल भैरहेको छ ।